हाम्रा ’boutमा – LIRA House
लिला राधिका मानविय अन्तरसंस्कृतिक जेष्ठ नागरिक केन्द्र, काठमाडौ नेपाल (लिरा हाउस) सन् २०१३ मा काठमाडौ जिल्लामा ….. जेष्ठ नागरिक केन्द्र खोल्ने उद्धेश्यका साथ स्थापना भएको हो ।
नमुना परियोजनाको रुप लिने उद्धेश्य राखेको यो परियोजना काठमाडौँको गैर नाफमूखि संस्था हो । यस संस्थाका संस्थापकहरु सबै नेपाली हुन ।
लिला राधिका मानविय अन्तरसंस्कृतिक जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, (लिरा हाउस) सन् २०१३ मा स्थापना भएको हो हामीले सहयोगको आवश्यकता भएका र मृत्यु हुँदैगरेका विभिन्न धर्म सम्प्रदायका जेष्ठ नागरिकहरु र उनका आफन्तलाई संस्कृतिक संवेदनशिलताका साथ सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेकाछौ ।
जेष्ठ नागरिकका अन्तिम दिनहरु आत्मनिर्भर र सम्मानका साथ विताउन सहयोग गर्ने विशेष उद्धेश्य राखेको छ । यस केन्द्रले करिब १२० जेष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक तथा बाह्य मेडिकल सेवा प्रदान गर्नेछ ।
डे केयरका माध्यमबाट थप १०० जेष्ठ नागरिकलाई दैनिक सेवा प्रदान गरिनेछ । जेष्ठ नागरिक केन्द्रलाई आत्मनिमर्भर बनाउनका लागि फलफूल र तरकारीका लागि बगैँचा तयार पारिने छ । साथै जेष्ठ नागरिकमा उमंग ल्याउनका लागि धर्मशालाको स्थापना गर्ने योजना पनि बनाईएको छ ।
नर्स, स्वयंसेवक र सहयोगीलाई तालिम प्रदान गर्नु यस परियोजनाको अवधारण रहेको छ । ३ वर्षे कार्यक्रम अन्तरगत उक्त तालिम अस्पताल सँगको सहकार्यमा प्रति वर्ष १० जनालाई प्रदान गरिने छ र तलिम सम्बद्ध आवासिय जेष्ठ नागरिक केन्द्रमा प्रदान गरिनेछ ।
एक्लै जीवन यापन गर्न कठिन हुने र आत्मा सम्मानका साथ जीवन जिउने अधिकार बाट परिवारले बञ्चित गराएका जेष्ठ नागरिकलाई उक्त अप्ठ्यारो परिस्थितीमा सहयोग प्रदान गर्ने लिरा हाउस जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको उद्देस्य रहेको छ । लिरा हाउसले सम्पूर्ण सेवा, चिकित्सक परामर्श र सहयोग बाधा बिहिन बनाई नमूना परियोजनाका रुपमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
सबै जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिंगका जेष्ठ नागरिकलाई आनन्ददायी र सम्मानित जिवायापनका लागि सन्तुलित वातावरणको सामाजिक र चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
लिरा हाउसको विधान ,२०१३
डा. धर्मराज भूसाल (अधिवक्ता)
यस परियोजनाको सुरुवात इन्टरकल्चरल आउटप्यटेन्ट होस्पिक सर्भिस डोङ बान जा (बर्लिन) को प्रमुखबाट आएको हो, जसले एक अन्तरसांस्कृतिक अस्पतालको स्थापना र प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा जर्मनीमा धेरै अनुभव प्राप्त गरिसकेका छन।
डा. भूूसाल सन् १९६५ मा नेपालमा जन्मनुभएको हो । उहाँले कानुनमा विद्यावारिधि, समाजशास्त्र र औद्योगिक ईन्जिनियरीङमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । उहाँले १४ वर्ष सरकारी सेवा र २ वर्ष यू. एन मा कार्यरत रहेको अनुभव छ । उहाँले नेपालमा रहेका विभिन्न संस्थामा स्वयंसेवक र कार्यसमिति सदस्यका रुपमा कार्य गर्नुभएको छ । उहाँले सन् २०११ मा बर्लिनमा ूम्भगतकअजभ ज्गmबलष्तäचभ क्ष्लष्तष्बतष्खभल ाüच क्üम(ब्कष्भल भ। ख्।ू नामक संस्थाको स्थापना गरि त्यसको अध्यक्षता समेत ग्रहण गर्नुभएको छ ।
उहाँ हाल इन्टरकल्चरल होस्पिक सर्भिस डोङ बान जा (बर्लिन) को प्रमुखको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँ सनु २०१४ देखि एशासियसन फर इन्टरकल्चरल वर्कको कार्यसमितिमा हुनुहुन्छ । डा. भूसाल लिरा हाउस काठमाडौँका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ।
श्याम प्रसाद खतिवडा
खतिवडा लिरा हाउसका संस्थापक सदस्य र कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ सन् फेब्रुअरी १९ १९६५ मा काठमाडौँको टोखाका जन्मनुभएको हो । स्नातक तहको अध्ययन पुरा गर्नुभएका उहँले नेपाली, हिन्दी र अँग्रेजी भाषामा दक्षता राख्नुहुन्छ । उहाँले कम्पयूटरको तालिम पनि लिनुभएकोछ ।
उहाँ नेपाली काँग्रेसको सक्रिया कार्याकर्ता हो भने १६ वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी संस्थानको आर्थिक शाखामा कार्यरत हुनुहुन्छ र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ ।
उहाँ १२ वर्ष सम्म काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघको महासचिवको रुपमा कार्यगर्नुभयो भने ३ वर्ष उपाध्यक्षको रुपमा कार्य गर्नुभयो । उहाँ विभिन्न संघ संस्था सँग आवद्ध हुनुहुन्छ ।
स्थापित लिरा हाउसको संस्थापक सदस्य र कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ र “द क्वीन्स कलेक्सन काठमाडौं नामक कम्पनीको संचालक हुनुहुन्छ ।
सन् १९६९मा जन्मनुभएका भण्डारी अध्यापक र सामाजिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँ सन् २०१४ देखि इन्टरकल्चरल होस्पिक सर्भिस डोङ बान जा (बर्लिन) को सक्रिय स्वयंसेवकका रुपमा कार्य गर्दै आउनुभएकोछ भने विभिन्न सामाजिक संघ संस्था संग आवद्ध हुनुहुन्छ । उहाँ लिरा हाउसको संस्थापक सदस्य र कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ ।
भट्टराई लिरा हाउसको संस्थापक र कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ विभिन्न सामाजिक कार्यमा आवद्ध हुनुहुन्छ ।
पाण्डे १९७७ मा जन्मनुभएका यस लिरा हाउसका सक्रिय कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले व्यवस्थापनमा स्नातक पुरा गरि काठमाडौंमा यूवा ट्राभल एण्ड टुर्स नामक कम्पनीको संचालन गर्दै आउनुभएकोछ ।
अधिवक्ता महेश आचार्य
आचार्य स्याङ्जामा जन्म लिएर काठमाडौँमा बसोवास गर्दै आउनुभएकोछ । उहाँ पेशाले अधिवक्ता र कलाकार हुनुहुन्छ । उहाँले फाईन आर्टस् र राजनितिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गर्नुभएकोछ । उहाँको नेपाली, हिन्दी र अँग्रेजी भाषामा दक्षता छ । उहाँ राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कला पदर्शनीहरुमा भाग लिई विभिन्न पुरस्कार जित्न सफल हुनुहुन्छ । उहाँ विभिन्न संघ संस्था र संजालसँग आवद्ध हुनुहुन्छ ।
सल्लाहाकार समिति लिरा हाउसका लागि उचित रणतिति र परियोजनाको विकासमा सहयोग पु¥याउने स्वतन्त्र समुह हो । विभिन्न विषयका विज्ञ र अनुभवि व्यक्तिहरुको यो समुहले लिरा हाउसका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछन् ।
यो संरचनाबाट लिरा हाउसको सझेदार संस्था, सरकारी निकाय र अन्तराष्ट्रिय संस्था सँगको समन्वयमा सहयोग पु¥याउँछ र व्यवस्थापकको कार्य र कर्तव्यहरुबाट लिरा हाउसलाई कुनै प्रभाव पर्ने छैन ।